FILOHA RAVALOMANANA : « DR ROBISON JEAN LOUIS NO KANDIDA TOHANANTSIKA » – MyDago.com aime Madagascar
Vory lanona teny amin’ny Magro Behoririka androany ireo mpitarika ny movansy Ravalomanana, ireo vahoaka ihany koa dia tonga maro teny an-toerana. Niditra mivantana tamin’ny antso an-telefaonina ny filoha Ravalomanana nanazava ny fanapahankevitra noraisin’ny movansy Ravalomanana. Nambarany tamin’izany fa tamin’ny heriny androany niresaka taminareo aho , nilaza hoe nangataka fivoriana maika tamin’ny Troika mba hijerena manokana ny raharaham-pirenena satria ataon’izy ireo amboletra ny fifidianana ary hitsabatsahan’ny iraisam-pirenena ny firenena mlagasy, ary na ny fanalana ireo andrimpanjakana izay ambonyindrindra dia ovaina hatramin’ny kandida.Tena tsy rariny mihitsy hoy izy ary mankarary fo mihitsy ny mieritreritra hoe ny kandidan’i neny izay ara-dalàna tsara satria tsy fanahy iniana ary tafiditra soamantsara tany Madagasikara kanefa natosika niala teny Ivato hiverina aty, tsy fidiny ho azy ny tsy andia tany fa satriny dia satriny ny ho tonga any. Nilaza aho hoy izy hoe tsy mety io fa diniho maika.Nanaiky izy ireo ary nanao fivoriana ny 11,12 septambra, ary tamin’izay ihany koa ny tenako hoy ny filoha Ravalomanana nilaza taminareo hoe tsy manaiky isika fa manaova hetsika mba hahafahana manosika sy mapiseho fa tsy mankasitraka , na manakana io fifidianana io, kanjo hoy izy dia nandeha ny fotoana.
Nisy dia nisy tokoa ny fivoriana, nisy dia nisy tokoa ny fanapahankevitra, ary nisy ihany koa ny communique momba RDC, Madagasikara. Manomboka tamin’ny 7-1,2,3,4, 5 milaza hoe afapo ry zarreo hoy izy, tanterak’ingahy Chissano ny zavatra teto Madagasikara ary mankasitraka ny fanalana ny kandida Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina. Milaza ihany koa izy ireo fa ny CES dia ankasitrahana ny zava-bitany izay hita fa fanilikilihana, tsy mifanaraka amin’ny lalana malagasy na ny iraisam-pirenena. Indrisy anefa ry mpiarami-tolona, zanak’i dada hoy ny filoha Ravalomanana hanjakazakan’ny any ivelany ary izay tiany atao ary vitany mihitsy ny manolo ny kandida. Tsy misy firenena hoy izy itsabatsahan’ny olona tahaka izany afa-tsy i Madagasikara irery eto ambonin’ny tany, misy 199 ny firenena eto ambonin’ny tany ary nosy kely indrindra dia Seychelles , tsy sahin-dry zalahy itsabahany. Nanazava ny tenako hoy izy , izahay tsy handray anjara amin’io fifdiianana io. Ny fanapahan-kevitra norasin’izy ireo tao dia n’inon’inona dia tsy maintsy vitaina ny fifidianana.Tsy maintsy miezaka manentana ny olona handray anjara daholo ny vahoaka malagasy rehetra. Nanapan-kevitra ry zareo hoy izy satria misy zavatra tsy marina ny voalazan’i Chissano milaza fa atao amin’ny 25 okotobra ny fifidianana fihodinana faharoa, ary amin’ny desambra ny fihodianana faharoa izay ao anatin’ny fahavaratra.Nilaza indray i chissano fa ny movansy Ravalomanana dia afaka mandray anjara raha avela mody ny filoha Ravalomanana. Ianareo mpitarika hoyizy dia hazavao amin’ny vahoaka ilay communique fa ny fahafantarako azy dia tsy mazava amin’ny vahoaka ny fanapahankevitra. Mandray anjara amin’ny fifidianana isika dia manohana olona izay tiantsika tohanana dia miverina i dada , izay no fanapahan-kevitry ny sadc. Raha ohatra hoy izy isika tsy mandray anjara sy mijoro amin’ny fanohanana ny tolona hijoroantsika, noho izany dia fifidianana tsy mitovy amin’ny fifiiianana rehetra io ka eo no tsy maintsy handraisantsika fanapahan-kevitra matotra ary manaraka ny fitsipika. Efa nifanaraka tamin-dry zareo aho hoy izy taty fa mody aloha aho vao manohana kandida tianareo ho tohanana.
Handray anjara main’ny fifidianana isika mba tsy hamelana andry zareo ho lany fotsiny amin’izao. Rehefa mandray anjara isika dia fantatro fa ny movansy Ravalomanana dia tsy matahotra fifidianana ary efa ela isika no niandry izany. Ataon’izy ireo mihitsy hoy ny filoha Ravalomanana ny handraisana fahefana araka izay azo atao koa tsy maintsy ataontsika izay hanakanana izany. Inareo mpitarika, isika rehetra hoy izy tsy maintsy miara-mientana ary manohana kandida ary rehefa manohana , anjarantsika ny mamantatra ary anjarako ny mifanaraka mivantana hoe tsy maintsy mody ary io no fepetra voalohany indrindra. Fantatro hoy izy fa nisy nalahelo tokoa, tsy nitovy hevitra , ohatra ny vadiko, Neny dia nalahelo dia nalahelo tokoa satria efa nanatena ary efa niaraka taminareo tokoa, Nilaza taminy aho hoy izy ny tombontsoan’ny firenena no ambony indrindra, aleo sakanana ny fandrobana ny harenantsika. Iarahantsika mahalala fa efa miomana amin’ny saina ratsy ary ao anatin’ny orana ny fifidianana. Mahatoky aho hoy izy fa vonona amin’izany isika. Hanohana kandida isika hoy ny filoha Ravalomanana ka ny kandida hotohanantsika dia ny Dr Robison Jean Louis. Fantatro fa mafy ary nanantena ahy, Neny ianareo kanefa olonkafa indray, nandritra ny efatoana sytapany ianareo niady foana , nanao izay hiverenan’ny ara-dalana. Tsy maintsy hampandaniantsika ny kandidantsika.
Auteur Solo Razafy*Publié le 14 septembre 2013 14 septembre 2013 Catégories Politique
Précédent Article précédent : Summit of the Organ Troika on Politics, Defence Communique
Suivant Article suivant : Kandidà Robinson Jean Louis : « Dada mody no tanjona »